Iimfuneko ezi-3 ezibalulekileyo kuso nasiphi na isicelo seWebhu | Martech Zone
Iimfuneko ezi-3 ezibalulekileyo kuso nasiphi na isicelo seWebhu
NgoLwesibini, Julayi 1, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ngakumbi nangakumbi, ndizifumana ndibuza abathengisi kunye neenkampani imibuzo efanayo ngaphezulu nangaphezulu. Ukuba ucinga ngokuphuhlisa esakho isicelo, ezi ziimpawu ezi-3 ezifuna ukudityaniswa ukusukela kusuku lokuqala kwisicelo sakho ukuba unqwenela ukugcina izixhobo kamva.
Ngaba isicelo sakho…
Yiba API? Akudingeki ukuba ikhetheke okanye inkonzo yewebhu… nayiphi na into yeXML ecacileyo eya kuyenza. Siza kufuna ukuyidibanisa kwisicelo sethu ngenye imini ukuzenzekelayo kwaye yenze kube lula kubaxumi bethu ukulawula ubuchwephesha obuninzi. Ukuba bendizokuqala isicelo namhlanje, ndingasebenza kwi API ngaphandle, ukhathazeka malunga noMsebenzisi ujongano emva… mhlawumbi nokuba une-UI yokudibanisa nge API Ukuqinisekisa ukuba siyakhe ngokwaneleyo.
Yiba neNqaku le-Arhente? Sifuna ukuthengisa abathengi bethu kwisicelo sakho, kodwa singathanda ukuba sikwazi ukusilawula. Nanku umzekelo: Kutheni abaBhalisi beDomain bengenazo iiAkhawunti zeArhente apho umxhasi anokugcina ubunini bommandla, kodwa iArhente ingalawula… kwaye ihlawule ... ubhaliso? Ndabhala umbhalisi wam ngokuhlwanje kwaye ndacebisa oku.
Yiba neNqaku leShishini? Iinkampani ezininzi nangakumbi yingqokelela nje yezincinci. Ukunika ingxelo kufuneka kudityaniswe kumanqanaba amaninzi kumbutho. UMongameli kwiCandelo le-VP kuMphathi weNgingqi kwi-Akhawunti… wonke umntu kufuneka abe nakho ukufumana imvume yokufikelela kunye nesishwankathelo sokunika ingxelo kulo naliphi na inqanaba eliphakathi.
Iimfuno eziqhelekileyo zokwenza into oyifunayo kunye neemfuno zokhuseleko zihlala zisebenza; Nangona kunjalo, ezi mfuno ndizikhankanyileyo ngasentla zihlala zingahoywa okanye zibekwa emva ukuba zenziwe kamva. Bavala ukuqokelela uthuli kwimisebenzi eseleyo, njengoko isoftware yenkampani yakho isenza.
Ukuba bendiyi-Venture capitalist yamashishini obuchwephesha kwezobuchwephetsha kwihlabathi leWebhu 2+, oku kunokuba zezona zibalulekileyo kum. Ukuba awuzicwangcisi ubuncinci ezi zinto, ndiyakholelwa ukuba ndiza kuthatha imali yam kwenye indawo. Ukuba ndiyithemba, ndihlala ndenza njalo.
tags: ikhowudiuyilo lwe infographicsfumana abachaphazeliiifontiGoogle +iframeowaphula umthetho weframeItemplate yeprojekthiwebsloginpress login
Jul 2, 2008 ngo-8: 46 AM
Uluvo lwakho lwearhente yobhaliso lwesizinda luqaqambile. Yiloo nto kanye endiyifunayo kwenye yeeprojekthi zam.
Jul 2, 2008 ngo-9: 48 AM
Ndingathanda kakhulu iNqaku le-Arhente. Ndigcina itoni yemimandla kwaye ndingathanda ukwazi ukuba eyona idomain ibhalisiwe kwigama lomxhasi wam kodwa ndisenako ukuba ne-100% kulawulo lolawulo lwedomain leyo kubo. Ndicinga ukuba abathengi bayayithanda le nto kwaye iphelisa uloyiko lokuba abacebisi banokubaphatha kakubi ngegama labo lesizinda ukuba ubudlelwane phakathi kwabo buba bubi.
Jul 2, 2008 ngo-9: 58 PM
100% bayavumelana nawe Doug, malunga ne-API. Inqaku leArhente… Umbono ogqwesileyo !. Izicelo zewebhu = Ixesha elizayo